JINGHPAW KASA: ဒီဇင်ဘာ (၂၉) တိုက်ပွဲ သတင်း
ဒီဇင်ဘာ (၂၉) စနေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - ဗန်းမော်လမ်း နားလုံ၊ ခရာ နှင့် ဘွမ်ရယ် တစ်လျှောက် ဒီဇင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ့ ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ဂျက်လေယာဉ် နှင့် စစ်ရဟတ်ယာဉ်များအသုံးပြုက ကေအိုင်အေများကို လာရောက်တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဓာတုလက်နက်များ ကိုပါ အသုံးပြုပြီး ကေအိုင်အေ များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော ဓာတုလက်နက်ကြောင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော် (၄၀) ကျော် အဆိပ်သင့် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်မှ နေ့လည်ပိုင်း (၁၁း၄၀) နာရီ တွင်တစ်ကြိမ်း၊ ညနေပိုင်း (၄း၀၀) နာရီတွင် တစ်ကြိမ်၊ (၅း၃၀) နာရီခန့်တွင် တစ်ကြီး တိုက်လေယာဉ် များဖြင့် (၃) ကြိမ်တိုင်တိုင် ကေအိုင်အေ များကိုဝေဟင်မှ လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယနေ့တိုက်ပွဲတွင် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဗမာအစိုးရ၏ စစ်လေယာဉ်တစ်စီးကို AA-GUN ဖြင့် ပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ခလရ (၅၃) မှ ဗိုလ်ကြီး ကျော်စွာအေး အပါအ၀င် အရာရှိ (၃) ဦး တိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးကြောင်၊ ဗမာစစ်သား (၆၀) ကျော် သေဆုံးကြောင်း ဆက်လက် သိရှိရပါသည်။
There wasasevere and fierce battle between Kှုachin patriotic soldiers and Burmese Government army in Na Lung, Hka Ra and Bum Re, which is on the way of Myitkyina - Ba Moh road, under KIA (5) Brigade area on 29th December. During the battle, Burmese Government used Military jet fighter, helicopter and firing with bio-chemical weapons. Over (40) KIA soldiers has been poisoning. Burmese Government fired with jet fighter three times: at 11:40 noon, 04:00 PM and 05:30 PM. Today battle, KIA shoot down one of the jet fighter with AA-Gun and3officer including Captain Kyaw Swa Aye and over 60 Burmese soldiers were killed.
jet 4စီးလို့ပြောဒယ်။၂heli ရောပါတယ်ဆိုဘဲ ။soso ကြမ်းKIA +(MHH)။စစ်တပ်က ကြောက်နေပြီထင်တယ်။
JET+heli အမြင်ကပ်လာပြီတစ်ခုခုလုပ်ကြအုံး။jet+heli ပြီးရင် သူတို့မှာဘာရှိသေးလဲကြည့်မယ်။သူတို့လက်နက်အကုန်သုံးလေတစ်ခြားနှိုင်ငံကငါတို့kachin ဘယ်လောက်ကြမ်းဒယ်ဆိုဒါသူများသိမှာ။
Jet 1 ram shakrip kau lu yang gaw ..Ah Raaaa Looo... re na re.. Yaw tik tik di ga K.K an hte hte rau re.
what is the result of this war...those who want to win the power will end their life by struggling with this power.
Kachin people are defending their land and their place. What is the purpose of this burmese soldiers.. They just attacking the Kachin for the winning of the power....
How will be this power struggling end...
Why...our Nobel PEACE prize winner so silent for war. What is the meaning of this Nobel PEACE Prize......
May our Big Big Lord Kachin people form this tyranny..
May the army of our Lord war against with Kachin people to bermese brutal soldiers.
ကေအိုအေ အို ဘိန်းသမား စစ်သားတွေ ဘိန်းအေးဆေး မရူ၇တော့ဘူး သေဖို့သာပြင်တော့
gasat tik tik di u ,hpang kaw nanhteamatu K.K kaw akyu hpyi ya ding yang rai nga ai.
dai fighter jet ni MIG 29 ni nau n na jang u tsa la lahpaw hte gap katut ai zawn ''buk galak'' nga na di hkrat wa na ra ai..dai shaloi gaw ''ara di, mung dung si rai sai''
ဂျက်ပဲလာလာဂျက်လီပဲလာလာ လေခ္ဈန်ပြီး ပစ်ချမယ်.ခြေမြန်တပ်ရင်းတက်လာရင်တော့အရှင်ဖမ်းပြီးဒုက္ခသည်တွေ စားဖို့လယ်ထွန်ခိုင်းရမယ်.မြောက်တိုင်ကိုတော့မီးတိုင်လုပ်ပစ်မယ်.တင့်ကားကိုတော့နွားချီးသယ်ခိုင်မယ်...အားလုံးက ကချင်ပြည် နဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲ
ကချင် သမီးပျိုတွေအတွက်၊ ကချင် မိခင်တွေအတွက်၊ အသက်စွန့်ပြီးကိုယ့်ဒေသကိုလုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။ နောက်နောင်ဘိန်းစားဘ၀မှ အပြီးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ လူ့အသက်တစ်ချောင်းဆိုတာ တန်ဖိုးရှိတယ်။ ဘယ်သူမှမသေတော့ရင်ကောင်းမယ်။
မိန်းမကျင့်မိန်းမကြံနဲ့ စစ်ခွေးတွေ ဓါတုလက်နက်သုံးလာပြန်ပြီ
myen mang hpe sha na ma tu,,myen mung ma ga de ,,LANG DA U,,la taw nga sai,,,,
The Day KIA request, ZIA is ready to help. Long live my brothers in the KIA and ABSDF
KIA/O don't give up God is with you as I am.this Burmese army are mother fucker.
My prayer is with you KIA.never give up.
Hkawn Bu said...
Kanau ni e…
maru marang nga hkum ka bang mu makam masham lam hte n'htan shai ai n'daiaten hta graiahkyak taw nga sai shawng lam na ni hpe n'gun jaw ga sha ka gaakyu hpyi ai hpeaten law law la ga shanhte hte anhteasat lawat gaw n'bung ai majaw …Shanhte hte n'mai dang rang hkat ai hking teng shagu kyu hpyi nga ga law…
rai dik jaw dik ai ten sha gu KK kaw manoi manat let myusha awm dawm shang lawt lu hkra chawm shakut naaten she rai sai mung dan shagu hta du nga ai myu sha ni yawng mung dang di dang dep ai ma de shang lawm shamu shamawt na ten rai sai usa kaw du nga ai ni e, gum san O Burma wa sa chyai ngut ai hpang she majan grau laja wa ai gaw kara hku rai kun loi gaw koichyan yu yang ka ja na re law. myen hte hpyen ma sa chyawm sha man ai hpe mung ning hkap ra na re. Miwa, Gala ni hpe mung myen hpe latnak n,dut jaw na matu ning hkap galu oi.
Hello...i think we have some regimes' dogs trying to comment on Jinghpaw Kasa post..why don't you guys go and comment on your papa's Myanma_a_lin or KyaeMon newspaper..what scare?..haha..KIA post, everyone can comment good or bad..Government post?..i don't think so..so who shows more sign of democracy?..there you go regime's dog..if you have guts, go comment on your won posts..and come get some bones from your papa generals..
ဗမာသူပုန်တော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ.....ခွေးမြီးကောက် ကျီးတောက်စွပ် ပါဆို
Hkau myitsu ni e..ngai gaw nye sha-ngai buga rai nga ai Jinghpaw Buga hpe grai tsaw ra ai law...Putau ba hpe mung ma gawp ma ka ga law...Anhte Putau ba mung lawu ga kaw na myen ni she hpring wa sai ...
ကိုယ့်ုကိုကိုယ်ပြန်ပြောမနေနဲ့သိလါးခွေးမြီတောက်ကြည်တောင့်စွပ့်ကဘာလဲသိလါးခွေးလောက်မှအသိညဏ်နဲတဲ့KIA က်ုပြောတာကွာမှတ်ထါး
အခုဆိုခွေးသားkiaတွေမြို့ k t vမှာအမျိုးထဲကလှတဲ့စော်အလန်းတွေခေါာဘီယာတိုက်မူးလါရင်အမျိုးမှန်းမသိတူမ မှန်းမသိ အကုန်ကားပေါာတင်လိုးလိုလဲမရတော့ဘူးမဟုတ်လါးအဲသိတော့ငါတို့ဘဲပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်မပူနဲသေလမ်းဖြောင့်ပေစေ မင်းတို့ကောင်မတွေကအချဉ်ထုတ်နေကြာစေ့ကြွေးရင်ရပြီကောကားပါဘို့မလိုဘူးကောင်းကောင်းမောင်းထောင်းနိုင်ရင်ရပြီမရှက်ရင်မေးကြည်kia မင်းအမျိုးတွေက်ုနောက်ဆုံးတော့မင်းတို့အမျိုးတွေကိုငါတိုပြတိုက်မှာသိမ်းထါးမယ်ဘယ်ပြတိုက်လဲသိလါးရန်ကုန်ကမီးသဂြုင်္းတိုက်
MESSENGER ZOMI BAPTIST CHURCH said...
Dear beloved Kachin people,
I pray for you. Be ye strong and courage the Sun will shine one day in Kachin State. The wrath of the Almighty God is pouring soon to punish the wicked Myanmar Army.
God bless Kachin Independent Army and Kachin People!!